Bisaddii Madoobayd ee soo gashay Garoonka Barcelona ma waxay ka socotay Jose Mourinho?! | Gool FM	Wednesday, February 10th, 2016	Home
Bisaddii Madoobayd ee soo gashay Garoonka Barcelona ma waxay ka socotay Jose Mourinho?!
Kaddib markii habee hore uu dhaawac soo gaaray Weeraryahanka kooxda Barcelona Lionel Messi ciyaartii ay kooxdiisu barbar dhac 0-0 isla dhaafi waayeen kooxda Benfica ee dalka Portugal ayaa waxaa isku soo beegmay dhaawaca Messi iyo Bissad/Mukulaal Madoow oo garoonka Camp Nou soo gashay.
Bisaddii joogtay Garoonka Real Madrid iyo tii soo gashay garoonka Barcelona ee Labaduba Madoobaa
Saxaafadda Spain ayaa weli hadal haysa Bisaddaasi waxaana qaarkood ay qoreen in Bisaddaasi ay sabab u ahayd Nasiib darradii ku dhacday Messi ayna ka socotay dhinaca Jose Mourinho.
Warkani oo aan la garanayn in uu yahay Ila qosol ama Mid sax ah ayaa wargeysyada Spain waxa ay caddeyn u soo qaateen Bisaddii Madoobeyd ee hadda ka hor lagu dhex arkay xarunta tababarka Real Madrid iyadoo tababaraha kooxdaasi Jose Mourinho uu dhowr kubbadood ku laaday oo uu la ciyaarayay.
Dad badan ayaa markii ay Sheekadaasi soo xusuusteen waxa ay is weydiiyeen “Bisaddani ma tii Jose Mourinho mise waa mid u eg?!!!!”.
Wararka	DAAWO: Muuqaal qiiro ku galin doona, 11-jir soomaaliyeed oo dhaliyay gool aan ka waynay kuwii matalayay xulkeena qaranka…(Kulan ka tirsan Koobka Jeem)+SAWIRRO
(London) 10 Feb 2016 Laacibka qadka dhexe ee kooxda ...	NOO HAKI DAGAALADDA KA DHICI DOONA MANCHESTER DERBY! Xifaaltanka durba waxa uu ka bilowday MUSHAHARKA ay kala qaadan doonaan! Yaa Jeeb weynaan doona?)
(Manchester) 10 Feb 2016. Jariiradda the Sun ayaa ...	Roman Abramovich oo liiskiisa xulashadda badalaka Mourinho ka tiray Diego Simeone. Muxuu ku qoon saday?)
(Madrid) 10 Feb 2016 Maanta ayeey si rasmi ah ...	GoolFM Mobile (USA)	About usContactsWaxaan NahayNagala Soo Xiriir	Copyright © Gool FM 2016. All Rights Reserved. Hosted By Afro